Madaxwayne Xasan Shiikh oo khudbad ka jeediyey kalfadhiga Baarlamaanka DF ee Soomaaliya – Radio Daljir
Maarso 2, 2013 8:27 b 0
Muqdisho, Maach, 02 2013 Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maaanta furitaankii kala fadhiga 2aad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaalia ka jeediyay Khudabadda uu kaga hadlay xaalada Qaranka.
Kalfadhiga baarlamaanka ?ayaa waxaa joogay Gudoomiyaha Barlamaanka, Prf. Maxemed Sheekh Cusmaan (Jawaaari) Raiisal Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid, Xildhibaano, iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada.
Khudbada madaxwaynaha ayaa ?waxaa uu ku ?sheegay in ?aan laysku ?khilaafsaneyn arimo dhawr ah oo ay ka mid yihiin ?Dowladnimada , Midnimo, Sarreynta Sharciga, arimaha Federaalka, Dhisid Ciidan Qaran, iyo qodobo kale
Madaxeweynaha ayaa goobtaas ka cadeeyay siyaasadda arimaha gudaha iyo tan dibadda.? Laga soo bilaabo markii la unkay dowladdaan bishii Agoosto ee 2012, waxaa dalka ka dhacay isbedello qiimo leh oo ay ka mid yihiin:
?Amninga, Nabadeynta, dib u dhiska dalka ?iyo xoraynta dhul ay Al shabaab haysatey. ?
Mar uu Madaxweynuhu ka hadlayey Ciidamada wuxuu sheegay ?in ay Ciidamadda Qalabka sida ? labo shaqo isku hayaan, kuwaas oo kala ah howlgalada nabadgelyada oo ay dalka ka wadaan iyo mid dib u dhis ayaga lagu sameynayo.?
Madaxeynaha ayaa sidoo kale sheegay? Siyaasadda Dowladda ina ka mid tahay ?soo celinta haybadii qaranka Soomaaliyeed , xiriirkii iskaashiga Soomaaliya wadamada dariska ah iyo ? guud ahaan caalamka sidii ay Soomaaliya ula yeelan lahayd xariir wanaagsan.
Kalfadhigaan oo ah kii 2-aad ee ay yeeshaan Baarlamaanka Dawaladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa horyaal arimo badan oo ay ka mid yihiin la xisaabtanka ha?adaha kala duwan ee dawladda iyo ansixinta qorshayaal muiim ah.
?Diiwaanka wararka Daljir
Caawa iyo Daljir -Sabti, March, 2-2013, Khadar Cawl Ismaaciil ( Daljir Buuhoodle )